Duqeyn ka dhacday Gobolka Jubbada Hoose & Jubbaland oo ka hadashay
01 April, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Diyaarado dagaal ayaa waxaa ay duqeyn ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Bu'aale ee Gobolka Jubbada Hoose Maamulka Jubbaland, halkaas oo ay gacanta ku hayaan Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Ururka Al-Shabaab.
Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Duqeynta laga fuliyey degmada Bu’aale iyo deegaanka Jabi ee Gobolka Jubbada Hoose,isla markaana khasaaro lagu gaarsiiyey Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab waa sida uu hadalka u dhigeen.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga ee Maamulka Jubbaland Cabdi Nuur Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in duqeynta sigaar ah loola beegsaday xero ay degmada Bu’aale ku leeyihiin Al-Shabaab,isla markaana lagu dilay Xubno uu ka mid yahay Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab una dhashay dalka Kenya.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Maamulka Jubbaland uu ku howlan yahay baarista duqeyn Xalay lala eegtay Saldhigyo Al-Shabaab ku leeyihiin tuulooyin hoostaga degmada Bu’aalo oo uu sheegay in qaarkood gawaari lagu gubay.
Al-Shabaab dhankooda weli kama hadlin warkaan kasoo yeeray Wasaaradda Amniga Jubbaland taas oo ku aadan in duqeyn ka dhacday tuulooyin hoostaga degmada Bu’aale khasaaro lagu gaarsiiyey Al-Shabaab.
Aadan Barre" Kenya iyo Jubbaland waxaa ka dhaxeeya xiriir gaar ah"
Shabaab oo soo bandhigtay sawirada Weerarkii Ceel saliini & hub u gacan galay
Jubbaland oo War kasoo saartay xariga Wasiir Janan
Khilaaf soo kala dhex-galay Imaaraadka & Yemen
Mas'uuliyiin soo dhaweeyay doorashada ka dhacday Kismaayo
DEG DEG:-Axmed Madoobe oo markale loo doortay Madaxweynaha Jubbaland